Hordhac - Shandong Luscious Pet Food Co., Ltd.
Shandong Luscious Butros Cuntada Co., Ltd.Waa mid ka mid ah shirkadaha ugu khibrada badan ee xayawaanka xayawaanka lagu iibiyo ee Shiinaha Shirkaddu sidoo kale waxay u korodhay inay noqoto mid ka mid ah soo saarayaasha ugu weyn ee daaweynta eeyaha iyo bisadaha tan iyo markii la aasaasay 1998 .Waxay leedahay shaqaale 2300, waxay ka kooban tahay 6 aqoon isweydaarsiyo heer sare ah oo leh hanti raasamaal ah USD83 milyan iyo iibinta dhoofinta USD67 milyan sanadkii 2016. Dhammaan alaabta ceyriinka ah waxaa loo isticmaalaa warshadaha gawraca caadiga ah ee ay diiwaangashan tahay CIQ.Sidoo kale shirkaddu waxay leedahay 20 beerood oo digaag ah, 10 beero duck, 2 warshad gawrac digaag ah, 3 warshad hilib gawrac ah. Hada badeecada waxay u dhoofinayaan US, Europe, Korea, Hong Kong, Koonfur-bari Aasiya iwm.
1998 ： Waxaa la aasaasay bishii Luulyo 1998, badanaa waxay soo saaraan cunno fudud oo digaag ah oo loogu talagalay suuqyada Japan.
1998 ： IS09001 nidaamka tayada la xaqiijiyay.
1999 system HACCP nidaamka badbaadada cuntada waa la xaqiijiyay.
2000 ： Shandong Luscious Machadka Cilmi-baarista Cuntada ayaa la aasaasay, kaas oo lahaa saddex shaqaale kuna casuumay khabiiro machadka Japan Pet Research Institute si ay ugu adeegaan la-taliyayaashiisa.
2001 ： Warshadda labaad ee shirkadda waa la dhammaystiray oo waxaa la galiyay wax soo saar, iyada oo sanadkii ay soo saari karto wax soo saar dhan 2000MT.
2002 ： Diiwaangelinta astaanta ganacsiga "Luscious" waa la oggolaaday, shirkadduna waxay billawday inay ku shaqeyso sumaddaan suuqa gudaha.
2003 ： Shirkadda waxay ka diiwaangashan tahay US FDA.
2004 ： Shirkadu waxay xubin ka noqotay APPA.
2005 ： Diiwaangelinta dhoofinta cuntada ee Midowga Yurub.
2006 ： Bakhaarka cuntada xayawaanka ee shirkadda ayaa la dhisay, ugu horreyn soo saarista cuntada qasacadaysan, sausages ham iyo alaabada cuntada bisadda.
2007 ： Astaanta ganacsiga "Kingman" waa la diiwaan galiyay, wax soo saarka Kingman aad bey suuq ugu yihiin magaalooyin dhowr ah oo dalka ka mid ah, oo ay ku jiraan Beijing, Shanghai iyo Shenzhen.
2008 ： Waxay dhistay sheybaar u gaar ah, waxay tijaabin kartaa noolaha, haraaga daroogada iwm.
2009 ： Boqortooyada Midowday ee UK BRC.
2010 ： Warshadii afraad waxaa loo aasaasay 250000 mitir murabac ah.
2011 ： Bilow khadadka wax soo saarka cusub ee Cunnada Qoyan, Biskit, Lafta Dabiiciga ah.
2012 Company Shirkadda ayaa ku guuleysatay tobanka abaalmarin ee ugu sareysa warshadaha Shiinaha.
2013 ： Bilow khadadka soo saarista cusub ee Calalka Ilkaha. Isla mar ahaantaana shirkaddu waxay cusbooneysiisaa oo ay hirgelisaa nidaamyo abaabulan, nidaamyada suuqgeynta, nidaamyada adeegga iyo nidaamka maareynta ERP si buuxda.
2014 ： Xarunta Cuntada qasacadaysan Dep. ku qalabaysan mashiinka buuxinta otomaatigga ah waxayna ka dhigaysaa shirkadda inay noqoto tii ugu horreysay ee qabata.
2015 ： Si guul leh loogu taxay Abriil 21,2015 .Shaqada waxaa loogu magacdaray SHARE LUSCIOUS, nambarku waa 832419
2016 Fact Warshad Cuntada Cuntada Cusub ee Gansu ayaa bilawday inay dhisto project Mashruuca wax soo saarka cuntada duck ayaa la bilaabay, aqoon isweydaarsiga ayaa si rasmi ah u bilaabay wax soo saar
2017 ： Warshadda Cuntada ee Cusub ee Gansu ayaa bilaabay wax soo saar capacity wax soo saar wax soo saar leh oo gaaraya 18,000 tan sanadkii。
2018 ： Shirkadu waxay ka diiwaan gashanayd IFS 、 BSCI ， iwm.
2019: Waxsoosaarka buskud bisadaha cusub oo lasameeyay lana helay astaamo
2020: Waa la sii wadaa ......